Sarimihetsika Jake Gyllenhaal sy fandaharana amin'ny fahitalavitra - Tsy maintsy mijery ianao! - Fialam-Boly
Sarimihetsika Jake Gyllenhaal sy fandaharana amin'ny fahitalavitra - Tsy maintsy mijery ianao!
Jake Gyllenhaal dia teraka Jacob Benjamin Gyllenhaal dia mpilalao amerikana ary mpamokatra horonantsary. Teraka tao amin'ny fianakaviana Gyllenhaal izy tamin'ny 19 Desambra 1980. Izy dia zanaky ny iray amin'ireo talen'ny talen'ny malaza Stephen Gyllenhaal ary mpanoratra mpanoratra tantara fantatra amin'ny anarana hoe Naomi Foner.
Nampiasa ny fahaizany i Gyllenhaal hahazoana ny anarany amin'ny sarimihetsika tsy miankina.Nanomboka ny asany tamin'ny fahazazany izy.Jake Gyllenhaal dia nahazo sarimihetsika maromaro tamin'izy mbola kely.Ny sarimihetsika voalohany dia ny City Slickers izay navoaka tamin'ny taona 1991. Taty aoriana, nanao ny anjara toerany tamin'ny sarimihetsika Rainy izy - Vehivavy iray mampidi-doza navoaka tamin'ny taona 1993 ary Homegrown izay navoaka tamin'ny 1998.
Ny fampisehoana tsara indrindra nataony dia ny Homer Hickam tamin'ny volana oktobra Sky izay navotsotra tamin'ny taona 1999 ary fampisehoana mahatalanjona iray hafa nataony dia tamin'ny naha-zatovo sahiran-tsaina an'i Donnie Darko azy izay navotsotra tamin'ny 2001.
'Ranomasina / fiainana iray' - Jake Gyllenhaal
Jake Gyllenhaal Top Movie & TV:
1. Ny ampitso rahampitso
The Day After Tomorrow dia sary mihetsika amerikana apokaliptika izay navoaka tamin'ny taona 2004. Izy io dia mpiara-manoratra, mitarika ary navoakan'i Roland Emmerich.Ity sarimihetsika ity dia miorina amin'ny boky The Coming Global Superstorm izay navoaka tamin'ny taona 1999 ary nosoratan'i Art Bell sy Whitley Strieber.
Ity sarimihetsika ity dia maneho ny fiantraikan'ny toetr'andro mahatsiravina taorian'ny fanakorontanana ny Oseana Atlantika Avaratra. Izy io dia momba ny toetr'andro tafahoatra niseho tamin'ny fihenan-tsofina manerantany izay mitondra amin'ny vanim-potoana ranomandry vaovao.Ny Andro Aorian'ny Rahampitso dia iray amin'ireo sarimihetsika mahatsikaiky indrindra sy fampisehoana mampihomehy izay nasehon'i Jake Gyllenhaal. Mampihomehy fotsiny ny ankamaroan'ny fanapahan-kevitra raisin'i Jake sy Jake amin'ity sarimihetsika ity.
Notarihin'i Tom Ford - Mampiseho ny fiainana eo amin'ny vehivavy manankarena miaraka amin'ireo fisehoan-javatra novakiany tao amin'ny tantara nosoratan'ny vadiny taloha.Susan dia nahazo tantara avy tamin'ny vadiny taloha ary hitany fa tena mahasarika izany. Rehefa mamaky ilay tantara izy dia manery azy hiatrika fahamarinana manelingelina maro momba ny fiainam-panambadiany.
Tantara henjana be momba ny fitiavana sy ny toerana ahodina ho olona tantara foronina ny olona. Ao amin'ny tantara an-tsehatra, ny sipa tsy faly dia lasa vady falifaly ary ny lehilahy iray izay namadika dia lasa lasibatra indray.
Netflix vs Hulu - Ady fampitahana
Sarimihetsika Brokeback Mountain angamba no iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra Jake Gyllenhaal hatrizay. Izay mbola tsy nahita an'ity sarimihetsika ity dia very antoka tokoa ary azo antoka fa tsy hahita ny iray amin'ireo fampisehoana tsara indrindra nataon'i Jake.
Ho an'i Jake Gyllenhaal, mahagaga amin'ny ambaratonga hafa noho ny toetrany rehetra efa nilalao azy ary ny mpitia sarimihetsika rehetra dia tokony hijery ity sarimihetsika ity tsy misy isalasalana. Mitsoka ny saina.
Zodiac dia sarimihetsika mampientanentana amerikana navoaka tamin'ny taona 2007. David Fincher no nitantana azy. Miorina amin'ny boky tsy foronina izay manana anarana mitovy ary nosoratan'i Robert Graysmith tamin'ny taona 1986.Ity sarimihetsika ity dia momba ny mpamono olona serial manaitaitra indrindra tamin'ny tantaran'i Amerika. Ny toetran'i Jake Gyllenhaal dia maherifo kokoa amin'ity tantara ity. Sarimihetsika Zodiac no tena afaka manasongadina ny fahaizan'i Jake Gyllenhaal maneho ny toetrany tsy fantatra.
Ny sarimihetsika Zodiac dia nahazo fanamarihana marim-pototra marobe, anisan'izany ny fiderana amin'ny asa sorany, ny fihetsika ary koa ny fitarihana.Natokana ho an'ny loka maro ity sarimihetsika ity, ao anatin'izany ny Saturn Award for Action Best na ny Thriller Movie.Zodiac dia voafidy ho ny sarimihetsika lehibe indrindra faha-12 nivoaka tamin'ny taonjato faha-21.
Ahoana ny fomba hampiasana ny fitsapana maimaimpoana an'i Disney Plus?
4. Faran'ny fiambenana
Ity sarimihetsika ity dia mifototra amin'ny tantaran'ny manamboninahitra LAPD roa izay miezaka ny ho tafavoaka velona amin'ireo arabe voatrabahan'ny heloka bevava.Ity sarimihetsika ity dia feno hetsika ary koa fotoana fohy mampitomany sy mampihorohoro. Jake Gyllenhaal dia nanome ny tsara indrindra taminy, ary toa very tanteraka amin'ny mpilalao izy hatramin'ny nanombohana ny sarimihetsika hatramin'ny farany.
Voatifitra tamin'ny endrika fanadihadiana izany. Manaraka ny andavanandron'ny tanora polisy roa izay mipetraka any LA satria mpiara-miasa sy mpinamana.Mampiseho ny fomba itondran'izy ireo ny herin'ny heloka bevava izay lehibe noho izy ireo.
Mety misy tantara an-tsokosoko maro. Saingy, End of Watch dia zavatra iray tena hafa.End of Watch ny fitifirana dia natao tamin'ny fomba hafa mihitsy. Azonao atao ny milaza amin'ny karazana tena zava-misy. Ireo mpilalao rehetra ao amin'ity sarimihetsika ity dia samy nanome ny zava-bitany tsara indrindra. Tena hanome soso-kevitra anao izahay ity sarimihetsika ity.
Donnie Darko dia horonantsary mampihetsi-po momba ny siansa amerikana navoaka tamin'ny taona 2001. Nanoratra sy nitantana an'i Richard Kelly izy io.Eto amin'ity sarimihetsika ity dia nanome fampisehoana mahatalanjona i Jake izay mampiseho fampisehoana hafa noho ireo mpilalao hafa efa nataon'i Jake teo aloha.Noho io sarimihetsika io sy ny zava-bitany tamin'ity sarimihetsika ity dia nitombo izy ary nanjary nalaza.
Azontsika atao ny milaza fa i Jake Gyllenhaal's Donnie Darko dia azo raisina ho iray amin'ireo fampisehoana nataony hatramin'izao.Ity sarimihetsika ity dia nalaina sary nandritra ny 28 andro.Ny tantara dia momba ny zatovo tsy milamina ara-tsaina izay notsidihin'ny lehilahy bitro mahatsiravina, tsy ho ela dia misy zavatra hafahafa manomboka hitranga amin'ny volana ho avy mandra-pahatongan'ny Halloween.
Misy fientanam-po be fotsiny amin'ny sarimihetsika mandritra ny seho rehetra. Ny teboka, ny hetsika ary ny tantara samihafa dia mety hampisavoritaka ny mpijery rehetra.
6. Mpivahiny amin'ny alina
Nightcrawler dia horonantsary mampientanentana amerikana navoaka tamin'ny taona 2014. Nosoratan'i Dan Gilroy izy io.Jake Gyllenhaal dia mitana ny toeran'i Louis Bloom izay olona tena tapa-kevitra hivelona ao Los Angeles amin'ny maha-mpaka sary azy.
Ny toetrany amin'ny Nightcrawler dia toy ny olona adala ary na dia olona malahelo noho ny mampihomehy aza.Jake dia mitondra hadalana amin'ny ambaratonga hafa. Ny tantaran'ity sarimihetsika ity dia mahaliana kokoa.
Milalao ny toetran'ny Dr. Johnny Wilcox izay mpampiantrano amin'ny fahitalavitra. Jake Gyllenhaal dia nitana andraikitra hafa tamin'ity indray mitoraka ity satria tsy nanao karazana andraikitra tahaka izany izy teo aloha.
Tsy dia misy dikany ny zava-bitany eto. Tokony ho hitanao samirery ny fahaizany manao zavatra.
Ny sarimihetsika Brothers dia navoaka tamin'ny taona 2009. Sarimihetsika tantara an-tsehatra amerikanina izay notantanin'i Jim Sheridan ary ny tantara dia nosoratan'i David Benioff.Izy io dia famerenana indray ny Sarimihetsika Danoa tamin'ny 2004.Eto amin'ity sarimihetsika ity - Rahalahy, Jake Gyllenhaal dia mitana ny andraikitry ny rahalahy mpanohana iray izay Tommy no anarany. Sam rahalahiny dia tany ampitan-dranomasina.
Na dia i Jake aza dia mitana andraikitra manohana amin'ity sarimihetsika ity. Saingy, nataony antoka fa hilalao ny tsara indrindra amin'ny toetrany. Tommy, ny tsara indrindra ho an'ny rahalahiny ihany no tadiaviny ary tiany ny manampy azy amin'ny toe-javatra tsy voafehy alohan'ny hahatsapan'ny olona azy.
Sarimihetsika sarotra tokoa ny mijery azy ary tena mahery izy io. Tonga lafatra ny fiakaran'ny mpilalao rehetra. Azonao atao ny milaza fa io dia iray amin'ireo sarimihetsika ambany indrindra ary koa sarimihetsika mandreraka. Ny fiafaran'ny sarimihetsika dia tena hahasosotra anao ary hampitomany anao mihitsy aza izay zavatra tsy azon'ny ambiny sarimihetsika atao mora foana.
Hanoro hevitra mafy an'ity horonantsary ity izahay satria manana ny zavatra rehetra tadiavin'ireo tia horonantsary amin'ny karazana ady / tantara an-tsehatra. Mila mijery ity sangan'asa ity tokoa ianao satria ho mendrika ny fotoanao io.
Ny sarimihetsika Jake Gyllenhaal dia nahazo ny toerany teto noho ny fomba fanehoan'ny mpisehatra fatiantoka sy ny fomba fiezahany hitantana azy.Mampiseho ny fiainan'ny mpiady totohondry tompon-daka izay niady mafy mba hamerenany ny zanany vavy avy amin'ny serivisy fiarovana ny zaza ary koa hiverenany ny asany matihanina aorian'ny loza iray namoizana ain'olona.
Ny toetran'i Jake Gyllenhaal Billy Hope dia voatery misotro ronono amin'ny lalao rehefa avy naratra maso. Vetivety dia voatifitra ny vadiny Maureen (Rachel McAdams) avy eo ary novonoin'ny rahalahin'ny mpanao ady totohondry ho avy.Jake Gyllenhaal dia mahavariana tanteraka amin'ny toetrany. Ny ankamaroan'ny olona dia tena tia azy ireo ka tian'izy ireo hilalao Batman indray andro any.
Ao amin'ny Jarhead, Jake Gyllenhaal dia mitana ny andraikitry ny fiainana an-dranomasina tena izy teo aloha, Anthony Swofford no anarany.Ity sarimihetsika ity dia manandrana maka endrika hafa amin'ny ady maoderina amin'ny fomba fijery tsy manam-paharoa izay tsy dia aseho matetika loatra. Mamiratra ny zava-bitan'i Jake Gyllenhaal.
Notarihin'ny talen'ny Sam Mendes izy ary manana mpilalao manohana lehibe.Raha mbola tsy nahita ilay sarimihetsika ianao dia tsy ity no karazana ady an-tsarimihetsika. Sarimihetsika tena hafa mihitsy izy io, tokony hojerenao tokoa.
Jake Gyllenhaal dia iray amin'ireo mpilalao malaza ao Hollywood. Nahavita sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra maro be izy izay nanome azy anarana lehibe eo amin'ny sehatry ny fialamboly. Mandrosoa alohako mijery ny sarimihetsika ho fantatrao ny antony mahatonga azy malaza be. Izy dia nilalao karazana andraikitra maro samihafa tamin'ny asany ary tamin'ny tena marina, ireo mpilalao rehetra efa nilalao azy, tena tsara fotsiny izy tamin'izy rehetra. Azonao atao ny mijery ny sarimihetsika rehetra notanisainay etsy ambony ary ho hitanao manokana ny hatsarany amin'ny fampisehoana nataony.
Inona no hojerena ao amin'ny Disney Plus?
Netflix India StreamFest - Ankafizo ny streaming 2 andro
Ahoana no hanafoanana ny famandrihana Netflix?
Miraculous Ladybug Season 5: Havaozina ve ity andiany ity sa nofoanana?
jereo ny youtube voasakana ao amin'ny firenena
hbo max vs hbo izao
tranokala izay nikatona tao an-tsekoly
tranonkala tsara indrindra amin'ny fanatanjahan-tena mivantana
google tv nametraka boaty ambony
Kaody kaody fanomezana xbox maimaim-poana 2020